Huawei P20 Lite: Nkọwapụta, ọnụahịa na mmalite | Gam akporosis
Huawei P20 Lite: Ogologo oge etiti dị elu na-akụkwa ọkwa
Huawei ka gosipụtara ọhụrụ ekwentị ya na Paris, Huawei P20 na P20 Pro, nke anyị gwara gị ihe niile na nke a ederede. Mana ọ bụghị naanị ihe ndị China na-ahapụ anyị na ihe omume ahụ. Maka na anyị enweela ike izute ekwentị ọhụrụ gị n'ime etiti etiti. Ọ bụ ihe gbasara Huawei P20 Lite. Modeldị dị ọnụ ala karịa atọ.
Ngwaọrụ dịịrị etiti adịchaghị mma. Ya mere o nwere nkọwa na-egosi ekwentị dị mma. Branddị ahụ ekpugheworị na nke a eme ihe ngosi nke Huawei P20 Lite. Gịnị ka anyị ga-atụ anya?
Dị ka ụmụnne ya ndị nwoke, imewe nke ngwaọrụ na-anọchi anya ọnụnọ nke ọkwa ahụ. Ihe omuma nke otutu ndi oru adighi ekwenye. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ịhụ na ọ bụ ọkwa mara oke karịa karịa ihe anyị hụla n'ụdị ndị ọzọ. Ya mere, ọ bụghị nkọwa zuru oke na-achịkwa ihuenyo nke Huawei P20 Lite a. Ọzọkwa, ọ bụ ihe ị na-achọ na-uru nke ga-eme n'ọdịnihu ime mgbanwe atụmatụ na-abịa na gam akporo P.
Dika anyi gwara gi, ekpughere ekwentị nkọwa ugbua na eze na ihe omume a emere na Paris. Anyị na-ahapụ ha n'okpuru.
1 Nkọwapụta Huawei P20 Lite
Nkọwapụta Huawei P20 Lite
Huawei P20 ọrụaka nkọwa
Nlereanya P20 Lite
Usoro njikwa Android 8.0 Oreo na EMUI 8.1
Ihuenyo 5.84 Inch LCD na mkpebi (2.244 x 1.080) Full HD +
Nhazi Kirin 659
Nchekwa n'ime 64 GB
Igwefoto na-aga n'ihu 16 + 2MP RGB na oghere f / 2.2
Igwe n'ihu 16 MP nwere oghere f / 2.0
Njikọ Bluetooth 4.2 LTE USB Type C
Atụmatụ ndị ọzọ Mkpisiaka mmetụta na ọdịdị ihu ude
Batrị 3.000 mAh na ngwa ngwa
Ahịa 389 euro
Nhazi nke ekwentị na-anọchikwa maka inwe a azụ akụkụ mere nke mmiri mmiri kristal. Nkọwapụta nke na-eme ka ekwentị nwere ọdịdị nke ekwentị dị elu. Yabụ anyị hụrụ na Huawei ejirila ngwa ngwa lekọta nkọwa ndị ahụ. Ihe anyị kwesịrị iji kpọrọ ihe n'ụzọ dị mma. Na mgbakwunye na zuo ezu na aghụghọ nke ndị ọzọ na ekwentị abụọ nke ọma ọkọnọ taa.
Banyere ime nke Huawei P20 Lite a, enweghi ọtụtụ ihe ịtụnanya. Ahịa ndị China ahọrọla Kirin 659 dị ka ihe nhazi, otu dika Huawei P10 Lite nwere. Yabụ na ha ahọrọla ịga n'ihu na nke ahụ, ọ dị ka nsonaazụ a afọala na nke a. Na mgbakwunye, ọ na-abịa na 4 GB nke Ram na nchekwa dị n'ime nke 64 GB. Ezi ụdịdị, ka ha mezuo mapụtara.
Maka sistemụ nrụọrụ akara ahụ adịghị ada mbà ma anyị na-ahụ ụdị gam akporo kachasị ọhụrụ na ngwaọrụ ahụ. Ebe ọ bụ na ọ ga-enwe Android Oreo ndokwasa natively. Ya mere ndị ọrụ ga-enwe ike ịnụ ụtọ site na mbido uru niile nke ụdị sistemụ arụmọrụ a na-enye anyị.
Tụkwasị na nke ahụ, ekwentị nwere igwefoto azụ abụọ, ihe bụ ụkpụrụ ugbu a n'ime oke ya. Fọọ na igwefoto 16 + 2 MP. Ekele maka nchikota a, anyị ga-enwe ọ functionsụ ọrụ dịka mmetụta bokeh a ma ama. Na ihu nke ekwentị anyị nwere a Igwefoto 16 MP na ihe mmetụta ndị ọzọ. Ọ bụ ihe mmetụta na-eji maka ịmeghe ihu na Huawei P20 Lite.
Huawei P20 Lite ga-erekwa agba anọ. Ọ bụ ezie na na nke a, ha abụghị otu agba ndị anyị hụrụla na ụdị abụọ dị elu. Na nke a, ekwentị ga-abụ dị na ọla edo, nwa, acha anụnụ anụnụ na pink. Ya mere, anyị agaghị ahụ ụda ụda nke a na-enwe mmasị na ya nke ukwuu na ngwaọrụ a.
Banyere ọnụahịa nke ngwaọrụ ahụ, Ọ dị ka ọ mechara kwenye na ọ ga-abụ euro 369. Na mbu agwa ya na ha ga - efu euro 389. Mana ọ dị ka ekwentị nke akara ndị China ga - emecha dị ọnụ ala karịa. Anyị nwere ike ịzụta ya na ọnụahịa a na mba anyị.
Banyere ụbọchị ntọhapụ ya, Huawei P20 Lite dị ugbu a na mba anyị. Ya mere ị nwere ike ịzụta ya ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei P20 Lite: Ogologo oge etiti dị elu na-akụkwa ọkwa
Microsoft Edge nchọgharị dị ugbu a maka mbadamba gam akporo
Huawei P20 na P20 Pro: Huawei dị elu-ebe a